WallPixel - 4K HD ကို & AMOLED နောက်ခံများ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » WallPixel - 4K HD ကို & AMOLED နောက်ခံများ
WallPixel - 4K HD ကို & AMOLED နောက်ခံများ APK ကို
WallPixel: အဆိုပါအကောင်းဆုံးအော်တို Wallpaper ကြောင့်ယခင်ကသီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်းမရှိဘဲအပြည့်အဝ resolution ကိုအတွက် 4k နှင့်က Ultra HD AMOLED နောက်ခံများအဘို့ App ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့! 😍
သင့်ရဲ့ device ကိုများအတွက်နောက်ခံပုံများရယူခြင်း WallPixel သင်ချုံ့ရနောက်ခံပုံများလှီးဖြတ်ဘယ်မှာပဲအခြားနောက်ခံပုံ app ကိုမဟုတ်ပါဘူးဒီbetter.💕ဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်။ WallPixel သင်သည် AMOLED HD ကိုနောက်ခံများအပါအဝင်နောက်ခံပုံထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှာတှေ့နိုငျ, ပင်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်နောက်ခံပုံများ upload တင်လို့ရပါတယ်တဲ့ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။
✔️သင့်ရဲ့ device မှအများဆုံးရယူပါ! သင်တစ်ဦး AMOLED ဖုန်းကိုရှိပါက, ထို့နောက်သင်အကောင်းဆုံးကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည် AMOLED 4K နောက်ခံပုံများ သင့်ရဲ့ဖုန်းပါ။
WallPixel နောက်ခံများ app ရဲ့အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်များ။
ကနေရှေးခယျြဖို့⭐ 20 + အုပ်စုများ! (နေ့စဉ်အသစ်ပြောင်းခြင်း) ။
⭐အော်တို Wallpaper changer ။
⭐ 1080x1920px (1080p Full HD ကို) နှင့် 2160x3840px (4k က Ultra HD) နောက်ခံပုံများ။
⭐သင့်ကိုယ်ပိုင်ပုံရိပ်တွေ upload, ရပ်ရွာထဲတွင်နာမည်ကြီးရယူပါ!
📷သင်တစ်ဦးဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာတစ်ခုသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံဆရာရှိပါသလား သငျသညျနောက်ခံပုံပစ္စည်းဓါတ်ပုံတွေကိုကလစ်နှိပ်ပါသလား? ထိုအခါ WallPixel သင်အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံဆရာနှင့်ဝေါလ်ပေပါဖန်တီးသူကျော်တချို့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရဖို့အတွက်အကောင်းဆုံး app ကိုပါ!
😍Everyနေ့၌သင်တို့အားငါအသစ်ကအများကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ် HD ကိုနောက်ခံပုံများ သငျသညျကို download လုပ်ပါနှင့်အခမဲ့သုံးနိုငျသော app ထဲမှာ!
📱သင်ထစ်နဲ့ဖုန်းကိုရှိပါသလား? ထိုအခါသင်သည် notchy အမျိုးအစားနောက်ခံပုံများနှင့်သင်၏ထစ်ဖုံးကွယ်နိုငျပါသညျ!
🔸 Abstract နောက်ခံများ
🔸 AMOLED နောက်ခံများ
🔸က Wallpapers DopeS #
🔸 superhero နောက်ခံများ
🔸 GreyScale နောက်ခံများ
🔸 DroidHolic နောက်ခံများ
🔸အာကာသ & ဂြိုလ်နောက်ခံများ
🔸 Notchy နောက်ခံများ (Notch ပုန်းခိုနောက်ခံပုံများ)
မှတ်ချက်: ကျနော်တို့ပုံရိပ်တွေမဆိုပိုင်ဆိုင်ကြဘူး, အသုံးပြုသူများသည်အမျိုးမျိုးသောရင်းမြစ်များမှသူတို့ကိုစုဆောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ app ကိုမှသူတို့ကို upload ။ မည်သည့်ပုံရိပ်ကိုသင့်ရဲ့မူပိုင်ချိုးဖောက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ, ထို့နောက်ရုံ, ငါတို့ကချယူပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဘို့အသငျသညျသငျ့လျြောသောခရက်ဒစ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
အော်တို Wallpaper changer ကဒီမှာနောက်ဆုံးတော့ပါ!
Blur Slider ကအတူ Fixed ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ။
WallPixel - 4K HD ကို & AMOLED နောက်ခံများ